Hita amin’ny sekoly sy kolejy 80 eto amin’ny Nosy… : mihanaka ny ambalavelona, mpianatra anarivo no voa | NewsMada
Hita amin’ny sekoly sy kolejy 80 eto amin’ny Nosy… : mihanaka ny ambalavelona, mpianatra anarivo no voa
Par Taratra sur 25/02/2016
Mpianatra efa ho anarivony amin’ny kolejy sy lycée (miankina sy tsy mpiankina amin’ny fanjakana) 80, ao anatin’ny Fari-piadidian’ny fampianarana (Dren) 14 eto amin’ny Nosy izao no fantatra fa tratran’ny aretina ambalavelona.
Ahina ho voahelingelina ny fizotry ny fampianarana amin’ny sekoly maro eto amin’ny Nosy. Fantatra, omaly, nandritra ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana, natao tetsy amin’ny FJKM Andrainarivo, fa mpianatra efa ho anarivony, amin’ny kolejy sy lycée miisa 80, ao anatin’ny Fari-piadidian’ny fampianarana (Dren) 14 eto amin’ny Nosy izao, ahitana ity aretina ambalavelona ity. Ho an’ny faritra Analamanga manokana, anisan’ny voakasin’izany koa ny Dren Andramasina sy Anjozorobe.
Tany Miandrivazo, teo aloha teo, no nahoraka sy nalaza be ity aretina ambalavelona, mahazo ny mpianatra, ity. Efa niaraha-nandre ny zava-nitranga, noho ny « Raharaha kohen Rivolala ». Ity farany izay mpitarika antokom-pivavahana sekta, voarohirohy ary efa voatana any am-ponja, ho tompon’antoka amin’izany. Izao anefa, io voalaza fa mihanaka dia mihanaka amin’ny faritra maro izao io. Voa na tratran’ny ambalavelona matetika ny tanora na ny ankizivavy. Somary marefo sy varimbariana izy ireny, raha mitaha amin’ny ankizilahy.
« Efa mihanaka amin’ny toerana maro ny tranga ka tsy tokony hohamaivanina mihitsy », hoy ny mpiandraikitra ny sekoly tsy miankina eo anivon’ny minisitera mpiahy, Rakotomalala Célin, omaly teny Andrainarivo.
Hiasa ny mpiandry…
Hisy, araka voalaza ny fidinana ifotony, hijerena ny zava-misy ahafahana mandray izay fepetra tokony horaisina. Fa etsy andanin’izay, voalaza ihany koa fa anisan’ny vahaolana lehibe hanakanana sy isorohana izany koa ny vavaka. Tsy vitan’ny hoe fihinanana fanafody fampitoniana avy amin’ny mpitsabo fotsiny ihany mantsy ity aretina ity. Omaly, niara-niaiky ny tompon’andraikitra fa tena ilaina amin’ny fomba hitsaboana sy hisorohana ity aretina ambalavelona ity ny vavaka.
Fantatra, araka izany, fa hisy ny fiaraha-miasan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena amin’ny mpitondra fivavahana eo anivon’ny Fiombonan’ny fiangonana kristianina eto Madagasikara (FFKM). Hidina ifotony, ary « hiasa » amin’ny fanalana ny fanahy ratsy amin’ireo mpianatra tratran’izany ny mpiandry.
Efa santatr’izany, rahateo, ny fampoam-pivavahana iraisam-pinoana lehibe, notarihin’ny FFKM, tetsy amin’ny FJKM Andrainarivo, omaly. Fotoam-pivavahana nitondrana am-bavaka ireo ankizy mpianatra tratran’ity aretina ity any amin’ny faritra maro any. Nanomana ity hetsika ity ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, notarihin’ny minisitra Rabary Paul, sy ireo mpiara-miasa aminy, toy ny avy amin’ny sampana misahana ny sekoly tsy miankina (Dinep).